Maamulka Cusub ee Degmada Bosoaaso oo Xikii maanta kala wareegay Maamulkii Hore . – SBC
Maamulka Cusub ee Degmada Bosoaaso oo Xikii maanta kala wareegay Maamulkii Hore .
Posted by editor on Agoosto 17, 2011 Comments
Xaflad ku aadan xil wareejinta Maamulka Cusub ee Degmada Boosaaso oo uu xilka kala wareegay Maamulkii hore ee Degmada ayaa maanta ka dhacday xarunta dowlada Hoose ee magaalada Boosaaso.
Xafladan ayaa waxaa ka soo qeybgalay gudigii gole sameynta degmada Boosaaso oo kala ahaa Wasiirka wasaarada Arimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Gen C/laahi Axmed Jaamac Ilka jiir, Wasiirka wasaarada Amniga Puntland Gen Khaliif Ciise Mudan iyo kuxeeganooda, Waaxyaha Arimaha bulshada gobolka Bari, Odayaal, iyo haweenweynaha gobolka, iyo sidoo kale xubnihii golaha deegaanka ee la dhaariyay .
Ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee Degmada Boosaaso Maxamuud Faarax Maxamuud oo isagu wareejinayay xilka, Waxaase inta uusan wareejin xilkaasi uu soo bandhigay waxqabadkiisii laga soo bilaabo 13dii May 2010 ilaa Bishan August 16keedii 2011 oo ah Maqal iyo muuqaal.
Waxuu ka sheekeeyay Heerarkii kala duwanaa ee ay soo maray intii uu xilka hayay, isagoona siweyn ugu dheeraaday Waxqabadii ku aadanaa degmada Boosaaso oo ay ugu horeyso Nadaafadeynta, Wadooyinka, Tayeynta iyo Dayac tirka Xaruntra dowlada Hoose, iyo weliba wax u qabanka dadka tabaaleysan ee ku dhaqan degmada Boosaaso.
Xasan Cabdalla Xasan Gudoomiyaha cusub ee maanta Xilka la wareegayay ayaa markii xilka lagu wareejiyay hadal uu halkaasi ka jeediyay waxa uu mahad balaaran ugu celiyay dhamaan masuuliyiintii ka horeysay ee degmada Boosaaso, isagoona ballan qaaday in uu siiwadi doono howlihii shaqo ee degmada.
Waxaa sidoo kale Xafladaasi hadalo qiimo badan ka soo kala jeediyay wasiirka Wasaarada Arimaha Amaanka Col Khaliif Ciise Mudanoo isagu siweyn ugu dheeraaday Amniga Degmada taas oo uu sheegay in ay qeyb ka yihiin xubnaha golaha deegaanka ee cusub.
Waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaarada arimaha Gudaha Puntland Gen Ilka Jiir oo isagu Shacabweynaha Puntland uga codsaday in la bixiyo Canshuuraha oo uu ku tilmaamay qaab waxqabadeed in iyaga dib loogu celinayo,
Gabagabadii xafladan maanta xilka loogu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee Boosaaso ayaa ku soo aadeysa xili maalin nimadii shalay la dhaariyay gudoomiye Xasan Cabdalla iyo Golaha deegaanka xubnahooda oo ilaa iyo maanta ay ka maqnaayeen 3 xildhibaan.